Tabex Shaqsiyeed E-Card
qiimaha joogtada ah € 34,99
Saaxiibkaaga ugu fiican ama xubnaha qoyskaagu wali sigaar ma cabaan?
Ku noolaanshaha caafimaadka ayaa had iyo jeer muhiim ahayd, laakiin maalmahan xitaa in ka badan sidii hore.
Waa maxay hadiyad kafiican qofka aad jeceshahay hibada caafimaadka iyo haraatiga balwadda?
Kaararkayaga hadiyadaha elektarooniga ah waxay ku yimaadaan afar kooxood:
EUR 10 (Qiime dhimis)
EUR 20 (Sicir-dhimista dalabka)
EUR 34,99 (hal xirmo oo bilaash ah oo Tabex ah)
EUR 69,98 (laba baakadood oo bilaash ah oo Tabex ah)
Dadku waxay u badan tahay inay mar hore ka fikirayaan go'aamada sanadka cusub iyo sigaar cabayaasha badankood joojinta ayaa ku dhow liiskaas.
E-maylka ay ku jiraan sawir muuqaal ah iyo iskuxiraha soo bandhigida khadka tooska ah ee kaarka ayaa loo dirayaa Cinwaanka emailkaaga ka dib marka lacag bixinta la farsameeyo.
Waxaan uga tagi doonnaa hal abuurkaaga sida aad ugu dhiibto sidoo kale qofka ugu dambeeya :)
€ 34.99 (qiimihiisu yahay hal xirmo) - € 34,99 EUR € 69.98 (qiimihiisu yahay laba xirmo) - € 69,98 EUR € 10 (faa'iido u leh qiimo dhimis) - € 10,00 EUR € 20 (faa'iido u leh qiimo dhimis) - € 20,00 EUR
Hel buuggan elektaroonigga ah ee waxtar leh markaad dalbanayso!
Buuggan ayaa kaa caawin doona inaad aragto dhammaan beenta ku saabsan tubaakada aad rumaysatay sannadihii aad sigaar cabbaysay oo dhan,
Waxay sidoo kale kaa caawineysaa inaad maskax ahaan diyaar ahaato waxayna ku siinaysaa xoogaa tilmaamo iyo tabaha ku habboon si aad uga gudubto qaybta ugu xun; usbuucaas koowaad.